Nyika dzidzivise kufamba panguva yeCoronavirus: San Marino yakaipisisa, China ichidonhera ku12, Italy 8, USA 48
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Nyika dzidzivise kufamba panguva yeCoronavirus: San Marino yakaipisisa, China ichidonhera ku12, Italy 8, USA 48
Airlines • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • China Kuputsa Nhau • Kurwisa • Hawaii Kupwanya Nhau • Iran Kuputsa Nhau • Italy Kuputsa Nhau • LGBTQ • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • South Korea Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau • Vatican Breaking Nhau
Coronavirus inokanganisa vanosvika kune dzimwe nyika
Parizvino, 110,090 vakabatwa neCoronavirus. Vanhu mazana matatu nemakumi matatu nevatanhatu vakafa uye 3831 vakanunurwa kubva kuCOVID-62,301
China ichiri nyika ine huwandu hwepamusoro hwehutachiona (80,738 12) asi zvichibva pahuwandu hwenyika uye ichienzaniswa nenhamba yezvirwere, China inongova nhamba gumi nembiri, South Korea nhamba 6, Italy 8, Iran 10 neUnited States. yeAmerica ichiri kutaridzika kuve yakachengeteka panhamba 48.
Kufamba neKushanya zvakarohwa zvakaipisisa uye hapana magumo mukuona zvakadaro. Zvisinei, vazhinji venyika vanoramba vakachengeteka. Heino runyorwa rwe nyika makumi mashanu neshanu dzine inopfuura 53 kesi yeCoronavirus pamamirioni evagari. Nyika mbiri dzakakomberedzwa neItari, San Marino neVictoria City dziri kutungamira pasirese, neimwe nyika diki Liechtenstein, yakavezwa pakati peAustria neSwitzerland inhamba yechitatu.
Zviripachena hapana imwe yenyika dzakanyorwa zvinzvimbo 1 kusvika ku5 zvine vanhu vane miriyoni, saka zvakaverengerwa zvichiteerana. Vatican City inongova nenyaya imwe chete, asi ine vanhu zviuru zvishanu chete, zvichiita kuti ive nhamba 5000.
Nyika yakaipisisa ine vanhu vanopfuura miriyoni yava South Korea, ichiteverwa neItari, Iran neChina.
Nyika gumi neshanu chete dzine vanhu vanodarika makumi maviri nemashanu vanorwara kubva pamiriyoni.
Chinyorwa chenyika makumi mashanu nenomwe dzinodarika 53 kesi pamirioni yakatapukirwa neCOVID-1:
Vatican Guta: 1000
Maodzanyemba Korea: 144
Mutsvene Martin: 62.3
Spain: 14.4 XNUMX
Portugal: 2.9 XNUMX
North Makedhoniya: 1.4
Kufamba uye Tourism nyanzvi: www.safertourism.com